SOLLA: “Guddida Doorashooyinka waxaanu u soo jeedinaynaa inay Iscasilaan” | Hubsad News
SOLLA: “Guddida Doorashooyinka waxaanu u soo jeedinaynaa inay Iscasilaan”
December 1, 2018 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
Warsaxaafadeed: Dib-u-Dhaca Doorashooyinka Gollaha Wakiilada iyo Golayaasha Deegaanka,-Ururka SOLLA…
Hargeysa (Hubsadnews):Ururka Qareenada Somaliland [SOLLA] isagoo tixraacya warsaxaafadeedka ay shalay oo taariikhdu ahayd 28/11/2018 soo saareen Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland, nuxurkiisuna ahaa dib-u-dhaca doorashada Golaha Wakiilada Somaliland iyo Golayaasha Deegaanka oo ay komishanka ku sheegeen in aan xiligeedii lagu qaban karin labadaa doorasho.
Ururka qareenadu markuu arkay Qodobka 37aad ee Dastuurka Qaranka JSL, oo jideeyey nidaamka isla-xisaabtanka iyo Waajibaadyada Madax-banaanida Xil-gudashada Waaxyaha Qaranka, oo midwalba Dastuurku u gaar yeelay in ay si madaxbanaan u gudato waajibaadkeeda dastuuriga ah, waax waliba waaxda kale kula xisaabtanto xil-gudashadeed. Sida ku cad Dastuurka Qaranka JSL:“Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala ah: Xeerdejinta, Fulinta iyo Garsoorka. Kala xadaynta awoodaha saddexda waaxood waxay noqon doonaan sida uu Dastuurku dhigayo. Waax waliba awoodda Dastuurku u gaar yeelay way u madax bannaan tahay”.
In dib-u-dhaca doorashada ay sababteedu tahay xil-gudasho la’aanta hay’adaha qaranka ugu xilsaarnaa qabashada doorashooyinka ee ay ugu horeeyaan Xukuumada, Golayaasha sharci dejinta iyo Komishanka Doorashooyinka, kuwaasoo aan xil la iska saarin qabyotirka caqabadahan mar walba doorashada dib u dhigaya, ee ay ugu horayso Saami-Qaybsiga Kuraasta Gobolada.
In warsaxafadeedka komishanka ee dib-dhaca doorashada aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. wakhtiga ay ku dhawaaqeena aanu ahayn wakhti ku haboon, xeer ahaana ay waajib ku tahay komishanka in ugu yaraan lix (6) bilood ka hor ku dhawaaqaan liiska codbixiyayaasha sida ku cad qodobka 7aad ee Xeer L/R 37, dib-u-dhaca la xidhiidha diwaangelinta codbixiyayaasha ee ay shalay sheegeenna uu waajib ku ahaa inay sheegaan muddo lix bilood ka hor ah, taasina ay tahay mas’uuliyad darro iyo dayaacaad Xil oo ka timid komishanka Doorashooyinka Qaranka JSL.
Waxaa cad in dib-u-dhaca doorashada tahay xil-gudasho la’aan ka timid Xukumadda uu Gadhwadeenka ka yahay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Golaha Wakilada JSL.
Ururka Qareenada Somaliland wuxuu bulshada u cadaynayaa sharci ahaan in aanu jirin waajib dastuuri ah oo ka saaran Xisbiyada Qaran ee Mucaaradka ah qabsoomida doorashada. Dooda Komishanka ee ah Xisbiga Wadani ayaa u sabab ah dib-u-dhaca doorashaduna maah cudur daar sharci ah oo doorashada dib loogu dhigi karo, mana aha in la baahiyo mas’uuliyadaha uu dastuurku cid u gaar yeelay. Xisbiyada Mucaaradka ee Qaranku umadda xil uma hayaan, oo ma soo galayaan nidaamka isla-xisaabtanka waaxyaha dawladda mana aha in lagu sobabeeyo dib u dhaca doorashada.
In Xubnaha Komishanka Doorashooyinku is-casilaan, madaama ay waajibaadkoodii qaran gudan kari waayeen.
In Xukumada iyo Golayaasha Qaranku bulshada u cadeeyaan cidda sababtay dib u dhaca doorashada ee waajibaadkoodu dastuuriga ahaa gudan wayday.
In Xukumada iyo Golayaasha Qarankuba soo celiyaan nidaamka isla-xisaabtanka dastuuriga ah ee ku xusan qodobada 37aad, 56aad iyo 97aadee Dastuurka Jamhuuriyada Somaliland.